PressReader - Ilanga: 2019-01-14 - UTHISHA UZOTHATHELWA IZINYATHELO NGEZINSOLO ZOKULALA NOMFUNDI
UTHISHA UZOTHATHELWA IZINYATHELO NGEZINSOLO ZOKULALA NOMFUNDI
Ilanga - 2019-01-14 - Izindaba - PAMELA ZUNGU [email protected]
USEMANZINI abilayo uthisha oyinhloko yezifundo, eZiphethe Secondary School, KwaDenge, KwaNongoma, osolwa ngokulala nomfundi (22), obefunda kulesi sikole ngo-2017.
Ngokuthola kweLANGA, lo thisha ulale nalo mfundi eneminyaka ewu-17 ubudala ngesikhathi kuqoshwa i- video yocansi. Ubonakala engena emqashweni womfundi ngesikhathi sokufundisa, eqala ukumwotawota bagcine bezithokozisa ngocansi, beshaya ngesudi yesele.
Babonakala benza baze baqede emuva kwalokho abonge lo thisha esho nokusho ukuthi usabuyela esikoleni, uyoqhubeka nokufundisa. UMnu Musawenkosi Gumbi (36) onguthisha kulesi sikole, utshele ILANGA ukuthi udaba lwalo thisha kade lwaziwa esikoleni, njengoba uthishanhloko nesigungu esilawula isikole, bebikelwe ngo-2017, kodwa kwangathathwa zinyathelo.
UMnu Gumbi uthi usekhathele okwenzeka kulesi sikole ngoba noma ngabe uyabika emahhovisini omnyango wezemfundo eZululand, akwenzeki lutho.
“Umnyango wezemfundo kumele uthathe izinyathelo eziqinile uma usuqondisa izigwegwe kulo thisha.
"Uthishanhloko kumele aziphendulele ukuba kungani engazitha-thanga izinyathelo ngesikhathi etshengiswa okokuqala le video yalo thisha. Abazali baletha izingane zabo ezikoleni ukuba zizofunda, hhayi kuba zizolalwa ngothisha,” kusho uMnu Gumbi.
Ngesikhathi ILANGA lithinta usihlalo wesigungu esilawula isikole, uMnu Mandlenkosi Mpanza ngalolu daba, ubuze ukuthi inombolo yakhe yocingo ithathwephi maqede lapho wavala ucingo.
ILANGA liphinde lamshayela, ucingo lwakhe lukhale lwaze lwangena egunjini lemiyalezo. Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA like labhala ngodaba lukaMnu Gumbi ekhala ngezinkinga ezikhungethe lesi sikole, wabala nayo eyokumbambathwa kodaba lwevideo kathisha nomfundi.
Ukhale nangokuthi kukhona abazama ukumsoconga ngenxa yokulwa nalezi zinkinga esikoleni njengoba ethi useke wasinda ngokulambisa edutshulwa.
Okhulumela ungqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe bayalwazi lolu daba njengoba bese bebikeliwe ngalo.
“Umnyango kawuhambisani nalokhu, kuyasethusa ukuthi kusekhona othisha abalala nabafundi.
Umnyango uzoluphenya kabanzi lolu daba, kanti uma usuqedile ngophenyo lwawo uzothatha izinyathelo eziqinile.
"Kumele sithumele umyalezo oqinile kothisha abenza lo mkhuba,” kusho uMnu Mthethwa.